Big bang theory - ဝီကီပီးဒီးယား
အဆိုပါ Big Bang အဖွဲ့သီအိုရီ (မကြာခဏ Big Bang အဖွဲ့သီအိုရီမှတိုစေ, မကြာခဏ TBBT သို့မဟုတ် BBT မှအတိုကောက်) စတီဗင် Molaro နှင့်အတူပြပွဲအပေါ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အစေခံနှစ်ဦးစလုံးအဘယ်သူကို၏, Chuck Lorre နှင့်ဘီလ် Prady အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအမေရိကန်ဟာသဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသုံးလည်းဦးခေါင်းကိုစာရေးဆရာများအဖြစ်အစေခံ။ အဆိုပါပြပွဲ  အဆိုပါနဝမရာသီစက်တင်ဘာလ 21, 2015 အပေါ်ပြသဖို့နှင့်စီးရီးဆယ်ဘို့တဘို့ရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးခဲ့စက်တင်ဘာလ 24, 2007 အပေါ်ဖြစ်သော CBS အပေါ်ပြသဖို့။
အဆိုပါပြပွဲအဓိကအား Pasadena, ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်ငါးဇာတ်ကောင်အပေါ်ဗဟိုပြုနေသည်: Leonard Hofstadter နှင့် Sheldon Cooper က, Caltech မှာနှစ်ဦးစလုံးရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးတိုက်ခန်းမျှဝေသူ, တစ်ပြားမှတစ်ဦးစားပွဲထိုးနောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးဆေးဝါးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာသည်အဘယ်သူခန်းမကိုဖြတ်ပြီးနထေိုငျသောမင်းသမီး Ivy League လို့; Leonard နှင့် Sheldon ရဲ့အလားတူပညာရှင်အဆင့်နှင့်လူမှုရေးအရအဆင်မပြေမိတ်ဆွေများနှင့်ပူးတွဲအလုပ်သမားများ, အာကာသအင်ဂျင်နီယာ Howard Wolowitz နှင့် astrophysicist Raj Koothrappali နှင့်။ လေးပါးယောက်ျားတွေရဲ့ပညာရှင်အဆင့်နှင့်ဉာဏ်ပဲန်နီရဲ့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဘုံသဘောနှင့်အတူကာတွန်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအဘို့အနှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်, ဇာတ်ကောင်ထောက်ခံကျော်အခန်းကဏ္ဍသရုပ်ဆောင်ဖို့ရာထူးတိုးခဲ့ကြ: တဲ့အခါအဲဒီ Rostenkowski, Howard ရဲ့ရည်းစား (နောက်ပိုင်းသူ့ဇနီး), ပဲန်နီနှင့်အတူတစ်ဦးမှ microbiologist ဟောင်းအခြိနျပိုငျးစားပွဲထိုး; တစ်ဦးချိန်းတွေ့ website တွင် Sheldon မှလိုက်ဖက်ခံရပြီးနောက်အုပ်စုပူးပေါင်းမည် (နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Sheldon ရဲ့ရည်းစားဖြစ်လာ) အဘယ်သူသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မေီ Farrah မုဆိုး, ;, ရာသီ 8 မှာ, Howard ၏မိခင်နှင့်အတူအတွက်လှုံ့ဆော်ပေးသူအစတူးဝပ် Bloom, ဇာတ်ကောင်ကိုမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုအကာတွန်းစာအုပ်စတိုးဆိုင်၏ငွေသားငွေရှာပေးနေပိုင်ရှင် နှင့်အမ်မလီ Sweeney, Raj ကွာဟနှင့် macabre နှင့်အတူတစ်ညှို့ရှိပါတယ်သူတစ်ဦးအရေပြားအထူးကုဆရာ။
မာတိကာ 1 ထုတ်လုပ်မှု 1.1 အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာသီချင်း 1.2 မင်းသားများ လစာ2ပင်မသွန်း 2.1 သိပ္ပံပညာရှင် cameos3ဇာတ်လမ်းတွဲများ4ထပ်တလဲလဲ themes များနှင့်ဒြပ်စင် 4.1 သိပ္ပံ 4.2 သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်မီဒီယာ 4.3 Leonard နှင့်ပဲန်နီ၏ဆကျဆံရေး 4.4 Sheldon နဲ့ Amy ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို 4.5 Howard ရဲ့အမေ 4.6 Vanity ကတ်များ 4.7 ထိုသီအိုရီ5Reception 5.1 ဝေဖန်ဧည့်ခံ 5.2 အမေရိကန်ကစံသတ်မှတ်ရေး 5.3 ဗြိတိန်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် ratings 5.4 ကနေဒါ ratings6ထုတ်လွှင့် 6.1 စုစည်းခြင်း 6.2 အွန်လိုင်းမီဒီယာ7DVD ကို / Blu-ray လွှတ်ပေးမှု 8 ဆုပေးပွဲနှင့်အဆိုပြုချက်များကို9ရောင်းချပေးခြင်း 10 မှတ်စုများ 11 ကိုးကား 12 ပြင်ပလင့်များ
2006-07 ရုပ်မြင်သံကြားရာသီအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးမူရင်းလေယာဉ်မှူးများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, စီးရီး လက်ရှိပုံစံကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလေယာဉ်မှူးအတွက်ထိန်းသိမ်းထားတစ်ခုတည်းသောဇာတ်ကောင် Sheldon Leonard ပြီးနောက်အမည်ရှိသောသူ Leonard (ဂျော်နီ Galecki) နှင့် Sheldon (ဂျင်မ် Parsons), ခဲ့ကြသည်။ Althea (Vernee Watson) နှစ်ဦးစလုံးလေယာဉ်မှူးအတွက် featured တစ်ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပထမဦးဆုံးစီးရီးဇာတ်လမ်းတွဲခဲ့သည်။  နှစ်ဦးအမျိုးသမီးဆောင်, ကေတီအဖြစ်ကနေဒါမင်းသမီးအမန်ဒါ Walsh "ဟုအားနည်းချက်အတွင်းပိုင်းနှင့်အတူတစ်လမ်း-ခိုင်မာစေခက်ခဲတဲ့-အဖြစ်-လက်သည်းမိန်းမ",   နှင့် Gilda အဖြစ် Iris က Bahr, ယောက်ျားဇာတ်ကောင်တစ်ဦးသိပ္ပံပညာရှင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေ။ သူမရည်းစားနှင့်အတူတက်ချိုးပြီးနောက် Sheldon နှင့် Leonard ကေတီနှင့်တွေ့ဆုံရန်, သူတို့သည်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမျှဝေဖို့သူမ၏ဖိတ်ခေါ်; Gilda ကေတီရဲ့အထံကခြိမ်းခြောက်နေပါတယ်။ စာမေးပွဲပရိသတ်တွေကေတီမှအပျက်သဘောတုံ့ပြန်, ဒါပေမဲ့သူတို့ Sheldon နှင့် Leonard ကြိုက်တယ်။ မူရင်းရှေ့ပြေးဆောင်ပုဒ်ဂီတအဖြစ် "သူမဟာသိပ္ပံနှင့်ငါ့ကိုမကျြစိကှ" သောမတ်စ် Dolby ရဲ့ hit အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါစီးရီးကိုတက်ခူးမခံခဲ့ရပေမယ့်ဖန်တီးသူပြပွဲ retool နှင့်တစ်ဦးဒုတိယလေယာဉ်မှူးထုတ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကကျန်ရှိသောသွန်းယူဆောင်နှင့်၎င်း၏နောက်ဆုံး format နဲ့မှပြသ retooled ။ ကေတီပဲန်နီ (Kaley Cuoco) ကအစားထိုးခဲ့သည်။ မူရင်း unaired လေယာဉ်မှူးကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိဖူးပေမယ့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ပြပွဲ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်, Chuck Lorre ကျနော်တို့နှစ်ဦးနှင့်တစ်နှစ်ခွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ပတ်သက်. Big Bang အဖွဲ့ရှေ့ပြေး ကိုပြု၏, ထိုသို့ ... စို့ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာဿုံအလုပ်လုပ်ခဲ့နှစ်ခုထူးခြားပြောင်မြောက်သောအရာတို့ကို ရှိ. , ကဂျော်နီနှင့်ဂျင်မ်ခဲ့သည် "ဟုပြောသည် ။ ကျနော်တို့လုံးဝအရာ rewrote, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Kaley ရှိမုန်နှင့် Kunal နှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိကြ၏။ " ကမ္ဘာ့အစဉ်အဆက်တစ်အနာဂတ် DVD ကိုလွှတ်ပေးရန်အပေါ်မူရင်းရှေ့ပြေးမြင်ရပါလိမ့်မည်ရှိမရှိသကဲ့သို့, Lorre ကပြောပါတယ်, "Wow, သောအရာတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်, ကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပြရန် ... " 
အဆိုပါ Big Bang အဖွဲ့သီအိုရီ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်ဒုတိယလေယာဉ်မှူးပြပွဲနှင့်အတူဆက်လက်မပြုခဲ့သောသူဂျိမ်းစ် Burrow ကညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါအခုမှဒုတိယလေယာဉ်မှူးကလေယာဉ်မှူးဇာတ်လမ်းတွဲတာဝန်ခံအခမဲ့ iTunes ကိုအပေါ်ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်, မတိုင်မီကဖြစ်သော CBS အပေါ်ထုတ်လွှင်မှမေလ 14, 2007  အပေါ်ဖြစ်သော CBS ဖြင့် 13-ဇာတ်လမ်းတွဲအမိန့်မှဦးဆောင်။ အဆိုပါပြပွဲစက်တင်ဘာလ 24, 2007 ပြသဖို့, နှင့်အောက်တိုဘာလ 19, 2007 အပေါ်တစ်ဦးအပြည့်အဝ 22-ဇာတ်လမ်းတွဲရာသီတက်သည်ကောက်ယူခဲ့  အဆိုပါပြပွဲတိုက်ရိုက်ပရိသတ်ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ရိုက်ကူးနေပါတယ်,  နှင့် Warner Bros. ကထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Chuck Lorre Productions ။  ထုတ်လုပ်မှု, နိုဝင်ဘာလ 6, 2007 အမေရိကတိုက်သပိတ်၏စာရေးဆရာအစည်းအရုံးမှမှုကြောင့်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ နီးပါးသုံးလအကြာတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2008 ရက်တွင်စီးရီးယာယီဗိုလ်ကြီးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်တစ်ခဏတာဟာသဇာတ်လမ်းကအစားထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါစီးရီး  အစောပိုင်းကအချိန် slot ကမတ်လ 17, 2008 တွင်ပြန်လာသောနောက်ဆုံးမှာသာ 17 ဖြစ်စဉ်များကိုပထမဦးဆုံးရာသီအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။   ကသပိတ်အဆုံးသတ်ပြီးနောက်ပြပွဲများတွင်တင်ဆက်ဖို့ကဒုတိယရာသီတက်သည်ကောက်ယူခဲ့သည် အ 2008-2009 ရာသီ, တိုးပွားလာ ratings နှင့်အတူစက်တင်ဘာလ 22, 2008  အပေါ်တစ်ချိန်တည်း slot ပါရှိ premiering, ပြပွဲ 2011 ခုနှစ်   2009 ခုနှစ်အတွက် 2010-11 ရာသီအားဖြင့်တစ်ဦးနှစ်ဦးနှစ်သက်တမ်းတိုးလက်ခံရရှိ အဆိုပါပြပွဲနောက်ထပ်သုံးရာသီတက်သည်ကောက်ယူခဲ့သည်။  2014 ခုနှစ်မတ်လ၌, ပြပွဲအ 2016-17 ရာသီမှတဆင့်နောက်ထပ်သုံးနှစ်အဘို့နောက်တဖန်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်စီးရီးအနည်းဆုံး 10 ရာသီရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်စီးရီးသုံးနှစ်တွင်သက်တမ်းတိုးရရှိထားသူဒုတိယအကြိမ်တစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်သည်။ 
ဒါဝိဒ်သည် Saltzberg, ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှရူပဗေဒနှင့်နက္ခတ္တဗေဒတစ်ဦးပါမောက္ခ, Los Angeles မြို့, scripts ကို check လုပ်ပေးပါတယ်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု, သင်္ချာညီမျှခြင်းများနှင့်ကျားကန်အဖြစ်အသုံးပြုကားချပ်ပေးစွမ်းသည်။  အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ / Co-ဖန်တီးသူဘီလ် Prady အဆိုအရ "ကျနော်တို့ Sheldon သူပျဉ်ပြားမှအမှန်တကယ်တိုးတက်မှုရှိရဲ့ဒါကြောင့် [ပထမဦးဆုံး] ရာသီတစ်လျှောက်လုံးတွင်လုပ်ကိုင်ခံရဖို့သွားမယ့်တစ်ဦးအမှန်တကယ်ပြဿနာပေးခြင်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ပြန်လည် ... ငါတို့ရှိသမျှသည်သိပ္ပံပညာမှန်ရရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ "
အဆိုပါ Big Bang အဖွဲ့သီအိုရီအတွက်သရုပ်ဆောင်တွေအများအပြားယခင်ကဂျော်နီ Galecki, Sara Gilbert, လော်ရီ Metcalf (Sheldon ရဲ့မိခင်မာရိ Cooper ကကစားသူ) နှင့် (တဲ့အခါအဲဒီရဲ့မိခင်ကစားသူ) Meagen Fay အပါအဝင် Roseanne အပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် Lorre အများအပြားရာသီများအတွက်စီးရီးအပေါ်တစ်ဦးစာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Big Bang အဖွဲ့သီအိုရီဖြစ်သော CBS အပေါ်စက်တင်ဘာလ 24, 2007 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ပြသဖို့။ အဆိုပါစီးရီးစီးရီး၏ပထမခုနစ်ရာသီဩစတြေးလျခုနှစ်တွင်  ကစီးရီးလိုင်းများ E4 (HD ကို) နှင့် Channel4ရက်နေ့တွင်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ 14, 2008 တွင်စက်တင်ဘာလ 2007  အတွက် CTV အပေါ်ကနေဒါမည်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီး အကိုးကွန်ယက်လေကြောင်းရာသီကိုး & တဆယ်ဖို့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာရှိပါတယ်သော်လည်း, ထိုခုနစ်ပါးကွန်ယက်ပေါ်တွင်တင်ဆက်ဖို့စတင်လုပ်ဆောင်နှင့်အောက်တိုဘာလ 2015 ကနေ 7mate နှင့် 2016 ခုနှစ်တွင်ရာသီမှ 8 ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မည်။  
Direct Translate From https://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Big_bang_theory&oldid=341461" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၀၇:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။